iminyaka Sine Ngaphezu eziyishumi Ukwenza Experience, Professional ngokwezifiso Blower motor, Blower emoyeni futha fan kurediyetha
Fob Inani: US $ 0.5 -8 / Piece
Supply Ikhono: 20000-50000Piece / Pieces Inyanga ngayinye
Material: Aluminium / yeZink
Imikhiqizo eboniswe lapha kuphela ukwethula kwenkululeko emisebenzini yebhizinisi lethu. Asikwazi ukwakha noma iyiphi izingxenye
ngokuvumelana sakho umdwebo noma isampula.
Ingxenye impahla: ADC12
Milling indlela: CNC
Umkhiqizo Machine: 800T
thina-OEM nomkhiqizi okuyinto ayisipesheli ukukhiqizwa umfutho ophakeme aluminium ufe ekubunjweni izingxenye, ungenza yonke
inqubo kusukela isikhunta design-isikhunta making-test isikhunta -die Ukusakaza-machining-surface ukwelashwa-kuhlolwa kwezethu
kwemboni, Product izindaba ukwakhiwa imishini, imishini yezokuxhumana, yezimoto amandla izinhlelo, kagesi
forklifts, izimoto kagesi, ezishintshayo ezimbonini kanye nezinye izindima ahlobene.
Aluminium Ukukhanyisa Ezezindlu:
Okufakiwe futhi Izinto zokuhamba:
Q: Ingabe imboni noma inkampani ukuhweba?
A: Singabantu umkhiqizi professional ukuklama futhi esikhiqiza
Q: Ingabe ukwenza imikhiqizo ngokwezifiso noma izingxenye sesiphelile?
A: zonke izingxenye abangekho isitokwe, inkambiso ezenziwe ngokuvumelana imidwebo ikhasimende noma amasampula! Uma uneminye izingxenye okufanele zenziwe, sicela ukhululeke ukuthumela imidwebo uhlobo / amasampula yakho kithi.
Q: Ingabe umdwebo yami ibe ephephile ngemuva Uyithole kanjani?
A: Yebo, ngeke ukukhulula umklamo wakho wesithathu ngaphandle ngemvume yakho.
Q: Iyini MOQ?
A: Ngokuvamile singazibekeli MOQ, kodwa kulapho, eshibhile. Ngaphandle kwalokho, siyajabula ukwenza prototype ingxenye noma isampula amaklayenti ukuqinisekisa izinga ejwayelekile.
Q: Can okwenzayo ekubunjweni esekelwe amasampula yethu?
A: Yebo, singenza nesilinganiso esekelwe amasampula yakho ukuze wenze imidwebo for tooling ukwenziwa.
Q: Yini kudivayisi yakho ukulawula izinga endlini?
IMP: uHlelo LweDeskithophu Ekude, eqine test umshini futhi UT Sonic njengoba NDT kokuhlola indlela ukulawula thusi ukubona ngaphansi kwamanzi ekubunjweni.
Previous: aluminium ukucutshungulwa OEM afe ekubunjweni izingxenye
Okulandelayo: Aluminum blower cover parts
Aluminium Amafutha Pump Umzimba
Aluminium Auto Pump Water
Aluminium Die Ekubunjweni Auto Amafutha Pump
Aluminium Amafutha umfutholuketshezi Pump Umzimba
Aluminium Water Pump Ezezindlu
Die Sakaza Aluminium Amafutha Pump
Die Ekubunjweni Pump Ukuze Auto
Die Ekubunjweni Water Pump
Pump Die Ukulingisa Izingxenye
aluminium die asakazwe Blower izingxenye
Die Ekubunjweni Aluminium Blower Wheel